musha / Blog / Yakasarudzwa neNASA, Aya Matoileti matatu Ari Kuenda Kumwedzi!
2020 / 11 / 01 kupatsanuraBlog 1461 0
Musi waGumiguru 22nd, NASA yakazivisa zvakabuda mumakwikwi, izvo zvakakonzera kusarudzwa kwematatu "zvimbuzi zvemwedzi", nemubairo wekutanga wemadhora zviuru makumi maviri achienda kune anokunda. Mibairo yemari yakapihwa kune zvimwe zviviri zvakanyorwa. Imwe yezvakakunda zvaive zvakagadzirwa naDeliffy dhizaini, zvichiita kuti Deliffy ive yega kambani yekugezera kuhwina mubairo.
丨 Mubairo wekutanga 丨
Yakagadzirwa Nerubatsiro rweVadzidzi veMuchadenga
Mubairo wekutanga kuhwina nzvimbo chimbuzi chakagadzirwa neboka dhizaini dhizaini Translunar Hypercritical Repository 1 (THRONE), inotungamirwa nainjiniya weWashington Boone Davidson, uye dhizaini dhizaini yaive yakavakirwa pazano rewaimbove mukadzi wechadenga Susan Helms.
Kuseka Kwekutanga-Mubairo Kupinda Kupinda
Susan Helms aimbove mukadzi wechikadzi mudenga reNASA uyo akashanda pane imwe yema shuttles ayo akamira kushanda muna 2011. Akaudza timu yekugadzira chimbuzi kuti vakadzi vanoongorora muchadenga vane nguva yakaoma yekushandisa chimbuzi zvichienzaniswa nevarume vanoongorora muchadenga vanogona kungoshandisa faneli kuyamwa weti kure. Nechikonzero ichi, CHITAMBO chakagadzira Space Toilet, iyo inogadzirisa dambudziko revadzidzi vechikadzi vanoomerwa nekushandisa chimbuzi muchadenga nekugadzirisazve chishandiso chakaita fanhi kuti inyatsokwana muviri wechikadzi.
Susan Helms, Aimbova Mukadzi NASA Astronaut
Pamusoro pezvo, kusiyana nezvimbuzi zvinechimbichimbi zvinoshandisa pombi yekutsvaira, timu YEMAZWI yakagadzira chimbuzi kuti ishandise fan isina blad kuti ibvise tsvina uye kuiisa muhombodo yakasarudzika yekuderedza kusangana kwaaona muchadenga netsvina.
丨 Wechipiri Mubayiro 丨 Mubayiro Wechipiri 丨
Fecal Matter Inogona Kugadzirwa Refiriji uye Kudzorerwa Panyika
Mubairo wechipiri wakaenda kuchimbuzi chinodonha chakagadzirwa naThatcher Cardon naDave Morse. Thatcher Cardon ndiColonel US Air Force colonel uye chiremba wechiremba wekubhururuka uyo akambohwina iyo HeroX Space Potty Dambudziko muna2017.
Chimbuzi ichi chine chigaro chimbuzi chakamisikidzwa chine gomba rakabayirwa mukati maro mune chinoiswa mubhedha kana tsvimbo yekuchenesa. inodzoserwa kuNyika. Sezvo iyi chimbuzi sosi isingareme zvakanyanya, inoderedza huremu hwekumhara kwemwedzi.
Tsvina inoiswa pombi muhomwe yekuunganidza
丨 Mubayiro wechitatu 丨
Mubayiro wechitatu unohwina ndiyo Space Toilet naTriffy dhizaina Franziska Wülker. Chimbuzi chine chimiro chechimiro chakakwenenzverwa uye chinonzi chakanakira vese varume nevakadzi. Sezvo chiteshi chenguva hachina simba rinokwevera pasi, chimbuzi chinoshandisa yakakosha centrifuge kuyamwa tsvina, kuitsimbirira uye wozoichengeta mutangi kuburikidza neyekutenderera yakaita seyakafambisa. Chimbuzi chine firita yekuona kuti hwema nemabhakitiriya hazvidonhedze mukamuri. Kupfuurirazve, kupomba kwechimbuzi kuri kuzvishandira uye kunoshanda kana magetsi abva, ichichinjira kuchimbichimbi chechiteshi.
Deliffy Space Chimbuzi Dhizaini
Mugadziri Franziska Wülker
Chimbuzi chinoshandisa tekinoroji yepakutanga yakagadzirwa naTrifi kuchengetedza huremu uye simba rekushandisa pasi pazviyero zvakagadzwa neNASA. Zvakare mukugadzira, vagadziri vakashandisa dhizaini software yeiyo mota indasitiri, muchadenga, nezvimwewo, izvo zvinogona chaizvo kuenzanisa kuyerera kwemvura mamiriro, uye iyo yaishandiswawo mukuvandudza tekinoroji yeTrifi isina Rimless. Thomas Stammel, Chief Technology Officer weTrifi, akati kambani inodada kuti FranziskaWülker akakwanisa kugadzira chimbuzi, chinova chiratidzo chehutungamiriri hwaTrifi muhunyanzvi hwechimbuzi.
Vazivi venyeredzi Pamwedzi Muna 2024 Chivabvu Vanoshandisa Zvimbuzi Zvitsva
Muna Gumiguru gore rino, NASA yakazivisa hurongwa hwazvino hwechirongwa che "Artemis" chemwedzi, chakarongwa kutumira mukadzi wekutanga uye murume wechipiri kumwedzi muna 2024. Zano rese mumatanho matatu, rinotarisirwa kuita $ 28 bhiriyoni, ayo madhora mabhiriyoni gumi nematanhatu ekuvandudza module yemwedzi.
Ruzivo irwo rwakaratidza kuti apo vazivi venyeredzi pavakatanga kumhara pamwedzi muna Zvita 1972, NASA haina kuvagadzirira chimbuzi chakakodzera kwavari, saka manapukeni chete ndiwo aigona kushandiswa panguva iyoyo. Kunyangwe NASA yakazogadzira chimbuzi chakakosha chechiteshi, asi vafundisi venguva yakareba vagara vari vechirume, kusanganisira chiteshi chemuchadenga, chitundumusere musere, masutu emuchadenga, nezvimwewo kusimudzira maonero echirume. Zvisinei, nhamba yevakadzi vanoongorora nyeredzi vanobva kunyika dzakasiyana siyana yanga ichiwedzera mumakore achangopfuura, uye NASA inotarisirawo kutumira vanoongorora vakadzi kumwedzi mumakore mana. Kuti izvi zviitike, kusangana vese varume nevakadzi vanoona muchadenga kunze kwePasi chimbuzi kunofanirwa kuvepo.
MaJapan maAstronauts Vanochengetedza Zvimbuzi zveNzvimbo
MaAmerican Astronauts Ari Kudzidza Space Zvimbuzi.
Asi izvo, zvimbuzi zvemuchadenga zvakatove kushandiswa munzvimbo dzinoverengeka dzenzvimbo dzenzvimbo, asi zvigadzirwa izvi zvakagadzirirwa microgravity chete, saka kuvandudzwa kwezvimbuzi zvemuchadenga zvekushandisa pamwedzi zvakave zvisingadzivisike. Zviri kupesana neiyi kumashure iyo NASA Space Toilet Contest yakazvarwa, uye isu tinotenda kuti vanoongorora muchadenga vachakurumidza kushandisa aya ekukunda zvimbuzi.
Pakapfuura :: Unoziva Iwe Kuti Ungashongedza Iyo Inonyanya Kuzivikanwa Sunken Bathroom Muna 2020? Zvadaro: 2020 US Bathroom Trends Chirevo: Smart Zvimbuzi, Sensor Faucets, Uye Tsika Yekugezera Makabati Ari Kuenda Kuve Anofarirwa!